Yamuna Online Clinic ယမုန်နာ ဆေးခန်း: 29-3-2014 Twin boys delivered at Yamuna clinic
29-3-2014 Twin boys delivered at Yamuna clinic
From Van Thawng Dim and Tial Lian Ceu, alive twin boys were delivered by Forceps deliveries at 7:58 PM and 8:06 PM. It is #339 labor case of Yamuna Clinic.
၂၉-၃-၂ဝ၁၄ မွေးလူနာနံပါတ် ၃၃၉ မှ ယောက်ျားလေး အမွှာ နှစ်ယောက် ယမုန်နာဆေးခန်းမှာ ယနေ့ ည ၇ နာရီ ၅၈ မိနစ်တွင် တယောက်နှင့်၊ ၈ နာရီ ၆ မိနစ်တွင်တယောက် မွေးဖွါးသည်။ ကလေးနှစ်ယောက်လုံးကို ညှပ်ဆွဲ မွေးဖွါးပေးရပြီး၊ အချင်းကိုလဲ လက်ဖြင့် ထုတ်ပေးရသည်။ ကလေးအကြီးကို CPR နှလုံးခုန်နှင့် အသက်ရှူ မှုအထောက်အကူ လုပ်ပေးရသည်။ မိခင်ရော ကလေးများပါ နေကောင်းကြသည်။
Photo Cer Boih
Posted by Dr. Tint Swe at 8:36 PM